Adala an’i jesosy 14 8. Tann Faya 4 Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Mr Sayda Misié Sayda 10 2. Mba marina anie 19 4. Tompontanana [ Tence Mena ] ahahah ye, oyeah,ahh Taratasy jiaby am anarako tsara ho anao Dossier jiaby ampelatagnako ambarao havanao….
Nielako Diso le nanoratako an ilay anarana mpihira. Efiko parsi 19 5. Adala an’i jesosy 14 8. Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho…. Nielako ikalamako Mankasitraka indrindra o?? Valim-pitiavana ho an’i Fanaik
Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho…. Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Toa ory ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza markna.
Ramano be Galona 6. Ramano be Galona 7. Mitia mangina 19 3. Mba marina anie 19 4. Efiko parsi np3 5.
Mr Sayde Mba Marina Anie » Telecharger Mp3 Gratuite
Maratra [ Inox ] Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Tompontanana [ Tence Mena ] ahahah ye, sayad Taratasy jiaby am anarako tsara ho anao Dossier jiaby ampelatagnako ambarao havanao…. Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka!